Cunug yar oo u nugul wax-u-beddel ahaan u tirtiridda Qoyska Soo-saaraha Wax Soo Saarayaasha Iyo Soo-saaraha | Kafiican
Magaca Product: Ilmuhu wuxuu masaxaa gacanta gacanta
Lambarka Moodalka: QMSJ-307
Waxyaabaha: Dhar jilicsan oo tayo sare leh oo aan dun lahayn
Waxyaabaha ay ka kooban Faytamiin C, Faytamiin E, Xylitol, RO biyo la sifeeyey, qoyaanka dhirta dabiiciga ah, iwm.
Cabir: 8.75 "* 5.75"
Cadad kiishkiiba: 72 kumbiyuutarada
Isticmaal Gaara: Nadiifinta; Lanolin xajiya qoyaanka maqaarka; Biyo saafi ah oo haya qoyaanka maqaarka.
MOQ: 5000 gasacado
Faahfaahinta xirxirida： 24 gasac / kartoon
* Nadaafad wanaagsan oo ilmahaaga ah
Masaxa gacmaha ilmuhu wuxuu ku habboon yahay tirtirka ilmaha afkiisa iyo gacmihiisa. Ilmaha biyaha ku masaxa xalka waxa ku jira fiitamiin C, fiitamiin E, xylitol iyo maaddooyin kale, kuwaas oo huuri kara maqaarka iyaga oo nadiifinaya maqaarka kana dhigaya nafaqada maqaarku mid dheellitiran. Waa ilmo saaxiibtinimo badan oo ammaan ah, oo aan waxyeello lahayn. Masaxaada qoyan ee ugufiican ilmaha.
Dharka miiqan ee tayada sare leh oo aan tolmo lahayn ayaa ah mid aad u jilicsan oo si tartiib ah u nadiifiya maqaarka jilicsan ee ilmaha. Masaxaani waa masaxaad cunug oo aan lahayn udgoon, masaxaadda aan udgoonuna u nuglaanin cuncunka maqaarka jilicsan ee ilmaha.
Maaddaama ay tahay soo saare tirtiraha qoyan, BETTER DAILY PRODUCTS C., LTD waxay aad ugu faraxsan tahay inay ku siiso adeegyo kuu gaar ah, OEM iyo ODM labadaba waa la heli karaa. Sida dib-u-eegista iyo khibrada adeegsiga masaxaadda ilmaha, waxaa laga yaabaa inaad leedahay shuruudo badan oo ku saabsan nadiifinta ilmaha. Waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan noqon doonno lammaanahaaga ugu habboon. Waxaan haynaa koox cilmi baaris wax soo saar xirfad leh leh, kooxda iibka, sidoo kale waxaan leenahay koox naqshadeyn xirfad leh.
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay fikrado kuu gaar ah oo ku saabsan dhumucda iyo baaxadda masaxa ilmaha, tirada masaxa xirmo kasta, iyo qaaciddada xalka. Fadlan noo sheeg oo aan kaa caawinno samaynta wax soo saar cusub. Waxaan si buuxda u dhagaysan karnaa soo-jeedimahaaga marka aan wadashaqeynaha kula yeelanno waxaanuna bixin karnaa fikrado dhammaystiran oo xirfadaysan.
Waxaan aaminsanahay in dadaalkeena aan wadaagno, aan xaqiiqdii ka dhigi doonno alaab aad u qurux badan oo qiimo leh. Waxaan rajeyneynaa in waxa aan sameyneyno aysan aheyn oo keliya soo saarista wax soo saarka ilmaha, laakiin aan u keeno caafimaad, nadaafad iyo nolol ku habboon aadanaha. Waxaan rajeyneynaa inaan gacan ka geysano hagaajinta tayada nolosha aadanaha oo dhan. Kaliya ma sameyneyno wax soo saar, laakiin waxaan sameyneynaa wax ka macno badan sheyga laftiisa.
* Fiiro gaar ah
Fadlan ka fogee meel aysan carruurtu gaarin si looga hortago wax liqidda.
Si tartiib ah ugu kaydi meel qalalan oo mug leh
Badeecadani waa mid aan lagu milmin karin biyaha, fadlan ku rid qashinka qashinka waqtigiisa
Ogeysiis gaar ah: Haddii aad xasaasiyad leedahay, fadlan jooji isticmaalka isla markiiba oo raadso daryeel caafimaad.
Hore: Jilicsan nadiifinta jaakada masaxa qoyan leh dhar tayo sare leh oo aan tolmo wanaagsan lahayn
Xiga: Masaxyada qoyan waxay ka kooban yihiin fiitamiin E iyo C Supplement nafaqada wajiga ka saarista qurxinta wax ku oolka ah
tirtiro jeermiska ilmaha
Masaxa Bath Baby
Maskaxda Nadiifinta Ilmaha
Ilmuhu wuxuu masaxaa gacanta gacanta
Masaxa Qoyan ee Ugufiican Ilmaha
Maskaxda Ilmaha ee Biyo Bixin Kara
ku nadiifinta masaxa ilmaha
Maskaxda Ilmaha ee Ku Salaysan Biyaha